Baasaboorka Soomaaliga iyo Hay’da Socdaalka Sweden | Somaliska
Sida aad la socotaan dadka soomaaliyeed ee degenaanshaha Sweden ka soo dalbada dibada ayaa lagu adkeeyay ayadoo shuruud looga dhigay in ay soo bandhigaan baasaboor, ayadoo la ogyahay in aysan Sweden aqoonsaneyn Baasaboorka Soomaalida. Arintaan ayaa keentay in dadkii Soomaalida ee dacwada ku imaanjiray sweden ay hoos u dhacaan 90% ka soo bilaabata bishii Janaayo ee 2010 ka dib markii maxkamada Socdaalka Sweden ay soo saartay go'aanka baasaboorka. Hay'ada Laan Kheyrta Cas (Red Cross) ayaa cambaareysay shuruuda lagu xiray qoxootiga Soomaalida. Abdulkadir Shariif oo ah xoghayaha Ururka Qaxootiga Soomaaliyeed ee Sweden ayaa sheegay in dad fara badan ay soo wacaan ururkiisa oo ay saamaysay arinta baasaboorka. "Go'aan aan akhliga galeyn ayaa la gaaray, dad badana waxay doonayaan jawaab. Go'aankaan macnihiisu waxa weeye in lakala qaybiyo reeraha. Ayadoo dadkaan uu horey dagaal u kala qaybiyay, oo waxay raadinayaa fursad ay ku midoobaan. balse hada dhibaato kale ayaa la soo daristay " ayuu yiri Abdulkadir Shariif. Dhiiga DNA ayaa Hay'da Socdaalka Sweden sheegtay in uu cadeyn karo xiriirka ka dhexeeya labo qof balse uusan aqoonsi u noqon karin qofka. Hay'da Socdaalka Sweden ayaysan qorshaha ugu jiran in ay wax ka badasho shuruuda baasaboorka. Balse waa laga yaabaa in is bedel yimaado maadaama ay warbaahinta Sweden arintaan isha ku hayaan oo Soomaalidu ay yihiin dadka ku badan Sweden ayadoo doorashada wadankana ay soo dhawday.
Baasaboorka Soomaaliga iyo Hay’da Socdaalka Sweden
Sida aad la socotaan dadka soomaaliyeed ee degenaanshaha Sweden ka soo dalbada dibada ayaa lagu adkeeyay ayadoo shuruud looga dhigay in ay soo bandhigaan baasaboor, ayadoo la ogyahay in aysan Sweden aqoonsaneyn Baasaboorka Soomaalida.
Arintaan ayaa keentay in dadkii Soomaalida ee dacwada ku imaanjiray sweden ay hoos u dhacaan 90% ka soo bilaabata bishii Janaayo ee 2010 ka dib markii maxkamada Socdaalka Sweden ay soo saartay go’aanka baasaboorka.
Hay’ada Laan Kheyrta Cas (Red Cross) ayaa cambaareysay shuruuda lagu xiray qoxootiga Soomaalida. Abdulkadir Shariif oo ah xoghayaha Ururka Qaxootiga Soomaaliyeed ee Sweden ayaa sheegay in dad fara badan ay soo wacaan ururkiisa oo ay saamaysay arinta baasaboorka.
“Go’aan aan akhliga galeyn ayaa la gaaray, dad badana waxay doonayaan jawaab. Go’aankaan macnihiisu waxa weeye in lakala qaybiyo reeraha. Ayadoo dadkaan uu horey dagaal u kala qaybiyay, oo waxay raadinayaa fursad ay ku midoobaan. balse hada dhibaato kale ayaa la soo daristay ” ayuu yiri Abdulkadir Shariif.
Dhiiga DNA ayaa Hay’da Socdaalka Sweden sheegtay in uu cadeyn karo xiriirka ka dhexeeya labo qof balse uusan aqoonsi u noqon karin qofka.
Hay’da Socdaalka Sweden ayaysan qorshaha ugu jiran in ay wax ka badasho shuruuda baasaboorka.
Balse waa laga yaabaa in is bedel yimaado maadaama ay warbaahinta Sweden arintaan isha ku hayaan oo Soomaalidu ay yihiin dadka ku badan Sweden ayadoo doorashada wadankana ay soo dhawday.
Cabsi laga qabo in Sweden ay Soomaalida ku celiso wadamo aysan u dhalan
December 17, 2010 at 07:25